Telenor ကနေ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှု Telenor Star ကို စတင်မိတ်ဆက်
20 Apr 2018 . 11:19 AM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Telenor Myanmar ကနေ Telenor ကို သုံးစွဲနေတဲ့သူတွေအတွက် Telenor Star နာမည်နဲ့ အသုံးပြုသူတွေအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
အခု Telenor Star ဆိုတာကတော့ လက်ရှိ Telenor SIM Card သုံးစွဲသူတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လအတွင်း သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ပမာဏနဲ့ သက်တမ်းအပေါ်မူတည်ပြီး Silver ၊ Gold နဲ့ Platinum Star Member ဆိုပြီး ခွဲခြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ခွဲခြားသလဲဆိုတာကို အောက်ပါ ဇယားမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်အဆင့်လဲဆိုတာကို သိဖို့ကတော့ *2345# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုတာ ဒါမှမဟုတ် “STAR” ဆိုပြီး 2345 ကို SMS ပို့လိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး Telenor Star ဖြစ်သွားတာက ဘာတွေရမှာလဲ?
Telenor ကနေ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းအရတော့ အခုလိုမျိုး Telenor Star Member အဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်
– တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များတွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အရောင်းပစ္စည်းများကို သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း။
– တယ်​လီ​နောစတားများ သည်​ ကြိုသုံး​ငွေ ကို ၃ဆ အထိ (ငွေကျပ် ၂၄၀၀) ရယူနိုင်​ခြင်း။
– တယ်လီနောစတားအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် တယ်လီနော၏ Call Center သို့အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ခြင်း။
– ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး (ဥပမာ။ တက္ကစီ) ဝန်ဆောင်မှုများကို အထူးလျော့ဈေးဖြင့် ရယူနိုင်ခြင်း။
– နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်များတွင် (ဥပမာ။ Pizzahut) အထူးလျော့ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူစားသောက်နိုင်ခြင်း။
– Online ဈေးဆိုင်များမှ အထူးလျော့ဈေးဖြင့် ရယူနိုင်ခြင်း တွေရရှိနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး လျော့ဈေးရဖို့ Promo Code ကို ရယူဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ “2121” ကို Pizzahut ဆို၇င် “PIZZAHUT” ၊ Shop.com.mm ဆိုရင် “SHOPMM” ၊ Oway Ride ဆိုရင် “OWAY” နဲ့ မန္တလေးက MiniOway ဆိုရင် “MINIOWAY” ဆိုပြီး ပေးပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Telenor Star Member တွေက Telenor အရောင်းဆိုင်တွေမှာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးတာတွေ၊ care@Telenor.com.mm ကို Email ပို့ပြီးတော့ တိုင်ကြားတာတွေ၊ 979 Call Center ကို အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တာတွေလည်း ရရှိနိုင်ဦးမှာပါ။
အခု Telenor Star Member ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင် ၃ လဆက်တိုက်ဖြစ်ခွင့်ရှိပြီးတော့ လစဉ် ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုလည်း စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Akhayar ပရိသတ်ကြီးရော Telenor ရဲ့ ဘယ်အဆင့် Star Member ဖြစ်ပြီးကြပြီလဲ?
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဆကျသှယျရေးအျောပရတောတဈခုဖွဈတဲ့ Telenor Myanmar ကနေ Telenor ကို သုံးစှဲနတေဲ့သူတှအေတှကျ Telenor Star နာမညျနဲ့ အသုံးပွုသူတှအေတှကျ အစီအစဉျတဈခုကို မိတျဆကျလိုကျပါတယျ။
အခု Telenor Star ဆိုတာကတော့ လကျရှိ Telenor SIM Card သုံးစှဲသူတှကေို လှနျခဲ့တဲ့ ၃ လအတှငျး သုံးစှဲခဲ့တဲ့ ပမာဏနဲ့ သကျတမျးအပျေါမူတညျပွီး Silver ၊ Gold နဲ့ Platinum Star Member ဆိုပွီး ခှဲခွားထားတယျလို့သိရပါတယျ။ ဘယျလိုမြိုး ခှဲခွားသလဲဆိုတာကို အောကျပါ ဇယားမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ကိုယျက ဘယျအဆငျ့လဲဆိုတာကို သိဖို့ကတော့ *2345# ကို ဖုနျးချေါဆိုတာ ဒါမှမဟုတျ “STAR” ဆိုပွီး 2345 ကို SMS ပို့လိုကျရငျ အဆငျပွမှောပါ။
ဒါပမေယျ့ အခုလိုမြိုး Telenor Star ဖွဈသှားတာက ဘာတှရေမှာလဲ?
Telenor ကနေ တရားဝငျထုတျပွနျထားတဲ့သတငျးအရတော့ အခုလိုမြိုး Telenor Star Member အဖွဈသတျမှတျခံလိုကျရပွီဆိုရငျ
– တယျလီနောအရောငျးဆိုငျမြားတှငျ ဝနျဆောငျမှုမြားကို ဦးစားပေးဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ အရောငျးပစ်စညျးမြားကို သကျသာသောဈေးနှုနျးဖွငျ့ ရောငျးခပြေးခွငျး။
– တယျလီနောစတားမြား သညျ ကွိုသုံးငှေ ကို ၃ဆ အထိ (ငှကေပျြ ၂၄၀၀) ရယူနိုငျခွငျး။
– တယျလီနောစတားအဖှဲ့ဝငျမြားအနဖွေငျ့ တယျလီနော၏ Call Center သို့အခမဲ့ ဖုနျးချေါဆိုမေးမွနျးနိုငျခွငျး။
– ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး (ဥပမာ။ တက်ကစီ) ဝနျဆောငျမှုမြားကို အထူးလြော့ဈေးဖွငျ့ ရယူနိုငျခွငျး။
– နာမညျကွီးစားသောကျဆိုငျမြားတှငျ (ဥပမာ။ Pizzahut) အထူးလြော့ဈေးဖွငျ့ ဝယျယူစားသောကျနိုငျခွငျး။
– Online ဈေးဆိုငျမြားမှ အထူးလြော့ဈေးဖွငျ့ ရယူနိုငျခွငျး တှရေရှိနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး လြော့ဈေးရဖို့ Promo Code ကို ရယူဖို့အတှကျဆိုရငျတော့ “2121” ကို Pizzahut ဆို၇ငျ “PIZZAHUT” ၊ Shop.com.mm ဆိုရငျ “SHOPMM” ၊ Oway Ride ဆိုရငျ “OWAY” နဲ့ မန်တလေးက MiniOway ဆိုရငျ “MINIOWAY” ဆိုပွီး ပေးပို့ရမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Telenor Star Member တှကေ Telenor အရောငျးဆိုငျတှမှော ဦးစားပေးဆောငျရှကျပေးတာတှေ၊ care@Telenor.com.mm ကို Email ပို့ပွီးတော့ တိုငျကွားတာတှေ၊ 979 Call Center ကို အခမဲ့ဖုနျးချေါဆိုနိုငျတာတှလေညျး ရရှိနိုငျဦးမှာပါ။
အခု Telenor Star Member ဖွဈပွီးပွီဆိုရငျ ၃ လဆကျတိုကျဖွဈခှငျ့ရှိပွီးတော့ လစဉျ ကိုယျ့ရဲ့အသုံးပွုမှုကိုလညျး စဈဆေးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ Akhayar ပရိသတျကွီးရော Telenor ရဲ့ ဘယျအဆငျ့ Star Member ဖွဈပွီးကွပွီလဲ?